नेपालमा किन धेरै छन् अर्जेन्टिनाको सर्मथकमा देखिए कलाकार देखि सर्बसाधारण ? – Todays Nepal
नेपालमा किन धेरै छन् अर्जेन्टिनाको सर्मथकमा देखिए कलाकार देखि सर्बसाधारण ?
आधिकरिक नाम अर्जेन्टिनी गणतन्त्र दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणपूर्वमा रहेको देश हो । यस देशको उत्तरमा पश्चिममा, पारग्वे उत्तरमा, ब्राजिल उत्तरपूर्वमा, उरुग्वे र दक्षिण अटलान्टिक महासागर पूर्वमा रहेको छ । संसारको आठौं ठूलो देश अर्जेन्टिना लेटिन अमेरिकी देशहरू मध्येको दोस्रो ठूलो देश हो । अर्जेन्टिना राष्ट्रिय फुटबल टिम सेलेक्सीयोन डे फुटबल डे आर्हेन्टीना अन्तराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा अर्जेन्टिनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गपर्छ । अर्जेन्टिना ले सन् १९७८ र ८६ मा बिश्वकप फुटबलको उपाधी चुपेको छ ।
तेस्तै सन् १९३०,९० अनि २०१४ मा उपबिजेता बनेको थियो । दक्षिण अमेरीका बाट बिश्वकपम फुटबलमा प्रतिनिधित्व गर्ने मा ब्राजिल पछि दोस्रो स्थानमा छ । बिश्व फुटबलमा सबैभन्दा बढी समर्थक भएका देशहरूको सूचीमा ब्राजिल पछि आउने नाम अर्जे्न्टिना नै हो ।
अर्जेन्टिनाले डिएगो म्याराडोना, ग्राभिएल बाटिस्ठुटा, लिओनल मेसी, स्टेफानो जस्ता बिश्व फुटबलको इतिहासमा नाम लेखाउने स्टारहरुलाइ जन्माएको छ । स्पेनी क्लब वार्सिलोनका स्टार स्टाइकार लियोनेल मेस्सी अर्जन्टिनाको राष्ट्रिय टीमको कप्तान हुन् । २०१६ को कोपा अमेरिकामा फाइनलमा चिलीसँग पराजित भएपछि मेस्सीले राष्ट्रिय टीमबाट राजिनामा दिएका थिए तर समर्थक र समकक्षीको अपेक्षानारुप उनी टीममा फर्केका थिए ।
मेस्सीसहित २३ खेलाडी
विश्वकप फुटबलको दाबेदार मध्ये एक मानिएको अर्जेन्टिनाले आउँदो जुन १४ देखि रुसमा सुरु हुने विश्वकप फुटबल २०१८ का लागि टिम घोषणा गरेको छ । विश्वकपका लागि घोषणा गरिएको टिममा स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीसहित २३ खेलाडी छन् । जसमा सर्जियो अग्युरो, पाउलो डिबाला र गोन्जालो हेगुइनसहितका प्रमुख खेलाडी छन् । तर इटालियन सिरी ए फुटबल क्लब इन्टर मिलानका माउरो आइकार्डी भने टिममा परेका छैनन् । अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक जोर्गे साम्पाओलीले घोषणा गरेको टिममा म्यानचेस्टर सिटीका अग्युरोसँगै इंग्लिस प्रिमियर लिगमा खेल्ने ६ खेलाडी परेका छन् ।
प्रियंका चोपडा निक जोनासको हातमाथि हात राखेर यसरी विवाहमा पुगिन्
२०२६ को विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने